४५ लाख डुब्ने छटपटी छ विदेशबाट फर्किएर कृषिमा लागेका यी युवालाई
मुलुक समाजवादको यात्रामा रहेको भनिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देखि पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड र शेर बहादुर देउवा तथा बाबुराम भट्टराईहरुले समेत सहि गरेर मुलुकको संविधानमा समाजवाद लेखिएको छ तर समाजवाद आउने कसरी ? ल्याउने कसरी ? यो प्रश्न पनि उठीरहैकै छ ।
कथनी र करणी फरक भयो भने मानिसमा निराशा आउँछ । सिद्धान्त र व्यवहारमा एकरुपता नआउँदा किसान समेत रुन परिरहेको छ । धेरैको मुखबाट आजकल आउने गरेको छ ‘समाजवादको निर्माणका लागि स्वाधीन पुँजी चाहिन्छ, स्वाधीन पुँजी बनाउन आत्मनिर्भर र व्यवसायिक अर्थतन्त्र चाहिन्छ, त्यसका लागि उत्पादन चाहिन्छ अनि उत्पादन हुनका लागि उत्पादनमैत्री वातावरण चाहिन्छ र त्यसका लागी माटो र उत्पादनलाई माया गर्ने शासकिय संस्कृति चाहिन्छ ।
तर, खोई किन हो कुन्नी संघीयताले दिएका राजकिय अधिकारको सदुपयोग यहाँ भैरहेको छैन । सदुपयोग मात्र होइन, काम गरेर खान खोज्ने जाँगरिलो युवालाई दुरुत्साहन गरेर समाजवाद भन्दा उल्टो व्यवहार देखाइएको छ । देशमा यस्ता घटना धेरै ठाउँमा छन् तर, राजधानीको काखैमा अर्थात् तारकेश्वर नगरपालिकाभित्रै एक कृषि उद्यमीले पाएको गोता, परेशान, ठक्कर र हैरानी निकै आक्रोशपूर्ण छ ।
‘खानका लागि मात्र होइन, देशमै केही गर्छु भनेर जर्मनीबाट फर्केर उदाहरणीय काम गर्न खोज्दामात्र मैले निकै शास्ति पाएको छु । न्याय कस्ले देला ?’ कृषक उत्पादक तथा उद्यमीहरुको हकहितमा पैरवी गर्दै आएको अष्ट ज अभियानको कार्यालयमा अध्यक्ष लोककृष्ण भट्टराईलाई गुनासो सुनाउन आएका एक युवा कृषि उद्यमीको यस्तो पीडादायी कुरा सुनेपछि संसारन्युजको टोलीले निजको उद्यमस्थल तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं १ साङलामा पुगेर गरेको प्रत्यक्ष संवाद तथा रिर्पोट यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
स्थायी घर पर्वतको धाइरिङ हाल जलजला गाउँपालिका बताउने यूवा कृषि उद्यमी राजाराम रिजाल जर्मनीमा काम गरेर फर्केका भएपनि नेपाली कोदो, दाल चिउरा र गेडागुडी कोरिया र जापान पठाएर नियतिजन्य व्यवसायको अनुभव संगालेका व्यक्ति समेत हुन् । ‘कोरियाको भीषा भएपनि देशबाटै उद्यम गरौं भनेर एग्रो टुरिजमको योजना बनाउँदै म साङला आइपुगेको हुँ । तर यहाँ गरीखान नदिने षडयन्त्र नै भइरहेको छ’ संसारन्युजसँग उनको गुनासो थियो ।
तपाईको योजना के हो भन्ने जिज्ञासामा रिजाल भन्छन्, –सानो स्वीमिङ पुल, चीनीहास र लौकल कुखुरा तथा माछा सहितको रेष्टुरेण्ट एवं कार्यक्रम गर्ने हल र घौडा सवार बनाएर नेपाली मौलिक चुल्होको स्वाद चखाउन शहरका मानिसलाई साङला पु¥याउँछु भन्ने उद्धेश्यसहित काम गर्न आएको हुँ । सुरुमा सबै तर्फका छिमेकीलाई सोधेर र जग्गाधनीसँग १० वर्षको कागज गरेर १ वर्ष अगाडि २०७५ मंसीरमा कागज गरैर मैले यहाँ काम गर्न सुरु गरे । मैले यी भौतिक पूर्वाधार (देखाउँदै) तयारी गरी काम सुरु गर्न के लागेको थिए, कहिले तलपट्टिको छिमेकीले र कहिले माथिपट्टीको छिमेकीले बहाना बनाएर कम्प्लेन गर्न सुरु गरे । छिमेकीको माया र साथ नलिइकन काम गर्न नसकिने मनोविज्ञान बुझेर मैले जग्गा भाडामा नलिदैं माथिपट्टीको जग्गाधनी बद्री बहादुर थापा र दक्षिणपट्टीको घरपट्टी माधव देवकोटालाई सोधे, उहाँहरु दुबै खुसी भएर यति राम्रो काम गर्दा सबैलाई राम्रो हुने भन्नु भयो । त्यसपछि मैले वकिल समेत रहनुभएका राजु खत्रिकै वुवाबाट जग्गा संझौता गरी काम शुरु गरेको हुँ ।’ उनले संसारन्युजसँग भने ।
तपाई कसरी झन्झटमा पर्नु भयो त ? भन्ने अर्को जिज्ञासामा उनको उत्तर थियो-मैले सबै पूर्वाधार तयार गर्दै जाँदा सबैको आँखामा राम्रो लाग्दै गयो, हाँस, कुखुरा र तरकारी सुरु भयो । आवतजावत बढ्न थाल्यो यहि विचमा कुन्नी किन हो, माथिका छिमेकीले जग्गा साहुँसँग बखेडा निकालेजस्तो गरे, तत्कालै डिस्टर्ब भयो भन्न थाले । मैले उहाँहरुलाई उहाहरु खुशि भएकौ पुरानो कुरो स्मरण गराएर विन्ति गरे । लगानी थपिदै गएपछि मैले घरेलु दर्ताको प्रक्रियामा जाँदा वडाबाट शिफारिस चाहिने भयो । म वडामा पुगे । त्यहाँ स्यावासी पाउँछु भन्ने लागेको थियो तर वडाअध्यक्षज्यूले त निकै तल झरेर उल्टो मलाई हप्काउनु भयो । पंचायती शासनको कथा मेरो मानसपटलमा घुम्यौ । अहिलेका जनप्रतिनिधिले राम्रो कामका लागी समस्या फुकाउँदै हिड्लान भन्ने आशा थियो तर त्यो भएन । बरु त्यसलगत्तै दुइ छिमकी खनिन थाल्नु भयो र जग्गा धनीको छोरा स्वयम वकिल हुदा पनि न्याय मरेजस्तो भयो । मलाई फिल्म जस्तै लाग्यो । लगानी ठूलो भइसक्यो तर षडयन्त्रले घेर्न लाग्यो की भन्ने आशंकामा तडपीइ रहे ।
तर मैले काम नगरी कहाँ हुन्थ्यो र ? मलाई ३ फेज विजुली चाहियो । बिजुली अड्डामा गए, वडाको शिफारिस ल्याउ भन्नु भयो । हजुर भनेर पाउमा लत्रिँदा पनि वडाले दिएन अनि विद्युत् अफिसमा गएर कराएँ । मेरा कुखुरा मर्ने भए, सबै यहि ल्याएर फ्याकौं भनेर कराएपछि बिजुली जोडे । यसपछि काम गर्दै जाने क्रममा जिल्ला प्रशासनसम्म पुग्नु पर्यो । सहायक सिडियोले ‘कि काम गरेर खान दिनुस् कि क्षतिपूर्ति दिनुस्’ भन्नु भएको थियो । वडामै मिलाउने भनेर फर्कियो तर उल्टो व्यवहार रोकिएको छैन । वरु रहस्यमय ढंगले ७ सय भन्दा बढि कुखुरा र ८ वटा हास मारिएका छन् । केही गर्छु भन्ने आँट अझै छ । मलाई यतिबेला ढाडस र न्याय चाहिएको हो, त्यहि क्रममा त तपाइसँग भेटिएको हो नि !’ उनले स्मरण गराए ।
‘राजाराम रिजाललाई कहिले बसाइ सराईको कागज ल्याउन उर्दी जारी गराइयो भने, कहिले अन्तको मान्छे यहाँ आएर फूर्ति दिने !’ लगायतका चेतावनी दिइयो । यस सम्बन्धमा साङला बसपार्क चोकका एक व्यवसायीले रिजालप्रति सहानुभुति दिँदै भने, ‘यी भाइ स्वाभिमानी छन्, केही गरेर देखाउन खोजेका छन् तर यहाँ उनलाई निराश बनाएर यहाँबाट धकेल्न र उनको पूर्वाधार हड्पेर फाइदा लुट्ने मनशायले दुःख दिएको देखिन्छ ।
रिजालको यो समस्याका सम्बन्धमा वडा अध्यक्ष बिदुर सापकोटासंग मागिएको प्रतिक्रियामा.. ‘ रीजालले जनप्रतिनिधिप्रति सम्मान गर्न जान्नुपर्नै र बाकी कुरा यही आएर भन्न सकिनै ’ बताएका छन भने १० बर्षलाइ कागज गरैर जग्गा दिएका जग्गाधनिका जेठा छोरा राजन केसीले भने ‘ रीजाल भाइले राम्रै काम गर्न खौजेकाले जग्गा दिएका हौ, छिमेकीले पनि पहिला सबैले राम्रो भनेकै हो, उहाले लगानी गरीसक्दा पनि असजिलो भोग्नु पर्दा हामी दुखि छौ । बाटो हालेर वडाबाट काम फुकाएर उनलाइ काम गर्ने बाताबरण बनाउन हामीले वडाअध्यक्षलाइ पनि भनिरहेकै छौ । ’
यस सम्बन्धमा अष्ट ज अभियानका अध्यक्ष लोककृष्ण भटराइले संसारन्युज संग भने ‘ यस्तो सुन्न पर्दा पनि हामीलाइ दुख लागैको छ । बिश्वास छ हाम्रो स्थलगत अध्ययन अगावै यो समस्या समाधान हुनेछ ।’
दूध, दही, फलफूल माछा मासुमा खरबौको व्यापार घाटा छ मुलुकलाई । एउटा व्यक्तिको उत्पादनले पनि हाम्रो केहि पैसा विदेश जानबाट रोकिन्छ छ । यो कुरो सम्बन्धीत सबैले बुझ्नै पर्ने हो । तर, गर्छु भन्नेलाई निराश बनाएर के गर्न खोजिदैंछ कुन्नि !
प्रस्तुति : फर्शुराम भुर्तेल
२०३१ मा कास्कीमा जन्मेका कवि तथा निबन्धकार बिष्णु पादुका पछिल्ला…
‘साइनोको अरु कुनै विधासँग समर्थक र विरोधी सम्बन्ध छैन’